Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere ngwaahịa - China MO Factory
MO Molybdenum nnukwu efere 1
Molybdenum ngwa na sayensị popularization Molybdenum bụ a metal mmewere, mmewere akara: Mo, English Aha: molybdenum, atọmịk nọmba 42, bụ VIB metal. Njupụta nke molybdenum bụ 10.2 g / cm 3, ebe agbaze bụ 2610 ℃ na ebe isi ọkụ bụ 5560 ℃. Molybdenum bụ ụdị ọlaọcha na-acha ọcha ọla, siri ike ma sie ike, na ebe agbaze dị elu na nrụpụta ọkụ dị elu. Ọ naghị eme ikuku na ọnọdụ okpomọkụ. Dị ka ihe mgbanwe, ọ dị mfe ịgbanwe ọnọdụ ọxịdashọn, ...
MO Molybdenum nnukwu efere 2
MO Molybdenum warara
Ngwaahịa aha: Molybdenum warara Ngwa: zọ, Deep ịbịaru Nka na ụzụ oke elongation Nka ọka 3.6-4.0 Nha nkọwapụta Obosara （mm） Ọkpụrụ （mm） Ogologo （m） 10 （± 0.1） 0.12 （± 0.02） ≥100 12 （1 0.1） 0.14 （± 0.02） ≥100 14 （± 0.1） 0.16 （ ± 0.02 ≥ ≥100 16 （± 0.1） 0.20 （3 0.03）